Qoraallada Erik Deckers Martech Zone |
Maqaallada by Erik Deckers
Waxaan la yeeshay wadahadal xiiso leh saaxiibkey, Chad Myers of 3 Koofiyadaha Suuq geynta, anoo kawada hadlaya sida dhaqaalaheena beeraha iyo Kacaankii Warshadaha ay u horseedeen dhaqankeena casriga ah ee shaqada. Sida kumbuyuutarrada kumbuyuutarka ee loo yaqaan 'QWERTY' (waxaa loogu talagalay in ay noqdaan kuwo aan fiicnayn oo furayaasha nooca wax lagu qoro aysan ku dhegi karin, haddana waxaan maanta ugu isticmaalnaa aalado aan waligood waligood dhejin doonin), waxaan u adeegsaneynaa fikirka ah in meel kasta oo u dhexeysa 100 illaa 1,000 sano jir ( iyo inbadan)
Sabti, Febraayo 6, 2010 Wednesday, April 30, 2014 Erik Deckers
Dadka i garanaya way ogyihiin inaan yara noqon karo naxwaha iyo xarakaynta. In kasta oo aanan u sii socon doonin sida saxda ah ee aan u sixi lahaa dadka (waxaan si gaar ah ugu canaantaa iyaga), waxaa la igu caan baxay in aan wax ka beddelo astaamaha ay ku jiraan ereyada khaldan, dib-u-dhigga khaldan, iyo guud ahaan khaladaadka khaldan. Markaa, looma baahna in la sheego, marwalba waxaan iskudayaa inaan hubiyo in qoraalkaygu uu gaadhayo bucshiradda naxwaha. "Xitaa on blogs?" Haa, xitaa bogagga internetka. “Laakiin
Xaaskeygu ugu dambeyntii waxay heshay fursad ay ku bedesho laptop-keeda 8-sano jirka ah, oo bilaabay inuu u shaqeeyo si ka badan sida processor processor walaalkiis laga soo bilaabo dhammaadkii 80s, kaliya ma ahan sida ugu dhakhsaha badan. Waxay ahayd Dell leh 512 MB RAM, iyo 80 MB RAM adag. Waxay ahayd mid gaabis ah, oo aan xasilloonayn, oo culeyska kor u kaca ayaa horay uga booday. Waxay ku dhammaatay inay iibsato Samsung Netbook oo ka socota Best Buy. Hagaag, taasi maahan mid aad uqalma blog, laakiin waxaa jira